Breziliana Iray Mpampiasa Facebook Voampanga Noho Ny Famoahana Vazivazy Mombanà Mpanao Pôlitika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Avrily 2017 10:19 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Ελληνικά, English, عربي, English
Notorian’i Russomano ny Facebook sy Cauê Madeira ary Raphael Evangelista, ilay tompon’ny pejy Legado da Copa. Manameloka an'i Evangelista ho nandika ny lalàm-pifidianana any Brezila ny didim-pitsarana iray tamin’ny Oktobra, milaza fa mivoy dokambarotra ratsy navoakan'olon-tsy fantatra ilay pikantsary. Nampihatra ny andininy ao amin’ny lalàm-panorenana Braziliana mandrara ny tsy fanononana anarana ilay didy, satria tsy hitan’ny besinimaro ny anaran’i Evangelista ao amin’ilay pejy Legado da Copa. Nampakarin'i Evangelista ny didy, kanefa nisy didy faharoa tamin’ny Martsa nataon’ny Fitsaram-pifidianan’i São Paulo, tanatinà latsabato 4-3, izay nanohana io didy io.
Ny andininy fahadimy ao amin’ny Lalàm-panorenan'i Brezila tamin’ny 1988 dia mirakitra ny fahafahana maneho hevitra saingy kosa mandrara ny tsy fanononana anarana amin’ny asa soratra. Voalazan'ny Lalàm-pifidianana Breziliana fa voarara ihany koa ny tsy fanononana anarana amin’ny zavatra mifandray amin’ny fampielezankevitra. Na izany aza, ny Lalàm-panorenana ihany koa dia miaro ny zon’ny mpanao gazety hanonona loharano avy amin'olon-tsy fantatra.
Nilaza ilay didy tamin’ny Oktobra fa:
Russomano, izay mpanolotra fandaharana amin’ny fahitalavitra teo aloha, dia voafidy ho ao amin’ny Antenimieram-pirenen'i Brezila tamin’ny 2014 niaraka tamin’ny PRB an'i Brezila, antoko iray mifandray mivantana amin’ny Fiangonana Manerantany, izay fiangonana evanjelika lehibe indrindra any Brezila nahazo hery tsikelikely tanatin'ireo andrim-panjakana ao an-toerana, ka mampatahotra mpanao fihetsiketsehana tsy ara-pinoana maro. Milaza ny mpisolovavany fa efa nametraka fitoriana 30 mahery taminà vohikala sy pejy izy nandritra ny fampielezankevitra ho fidiana ben’ny tanàna tamin'ny 2016. Tamin'ny farany, nahazo 13% tamin'ny vato i Russomano ary resin’i João Dória, mpilatsaka ho fidiana avy amin'ny PSDB.